::: Somalitalk.com Online Community ::::
FAALLO: July 4, 2004
Muddo hal sano iyo siddeed bilood ah ka dib, shirka Soomaalidu wuxu u gudbey wejigii saddexaad oo noqonaya marxalddii ugu dambaysey hanaankii hore loogu qorsheeyey in dib u heshiisiinta Soomaaliya loo maro. Beelaha Soomaalida oo horay inay shan waaxood awoodda siyaasadda dalkooda u qaybsadaan ugu heshiiyey ayeey afar ka mid ahi ku guuleysteen inay soo gudbiyaan xubnaha uga mid noqonaya guddi 15 xubnood ka kooban oo loogu talo galay inay wixii khilaafaad ah ka gar naqaan. Waxay kaloo afartaas qabiil gudbiyeen shir guddoono iyo xoghayno shirar beeleedyada sida kala duwan u socda maamulaya. Sidoo kale beelahu waxay ku hawlan yihiin inuu dhinac waliba abuurto guddi si hoose ugu qaybin doona tirada beel kasta kaga soo hagaagtey 275’ka kursi ee uu baarlamaanka federaalka ku meel gaadhka ah ee jamhuuriyadda Soomaaliya ka koobnaan doono. Wasiirada arrimaha dibedda ee dalalka urur goboleedka IGAD ka tirsan ayaa la filayaa inay 15ka bishan July madasha shirka yimaaddaan. Waxaana Soomaalida la faray inay magacyada xubnaha baarlamaanka soo gudbiyaan inta ka horraysa kulanka wasiirada oo guud ahaan maamulka wejiga 3aad ee shirka iminka si buuxda gacanta ugu haya. Soomaaliduna waxay si kala duwan ugu mashquulsan yihiin sidii ay hawlaha laga sugayo u soo geba-gebayn lahaayeen.
Nidaamyadii is bahaysi ee intuu shirku socdey la isku cadaadin jirey iyo hababkii is kooxaysi ee ay kooxiba siyasadda kuwa kale ku carqaladayn jirtey waxaad mooddaa inay meesha ka bexeen oo waxaad arkaysaa nin kasta oo siyaasadda beeshiisa ka war-wareegi jirey oo ay iminka dani badday inuu soo yoxoobsado golaha ay haybtiisu wax ku qaybsanayso. Waxaa kaloo gebi ahaanba baab’day khilaafyadii guud ee horumarka shirka xanibi jirey maadaama dadkii isku raraa ee siyaasadda colka ku ahaa ay beelohooda kala aaddeen. Qaybsiga baarlamaan aan aag doorasho iyo deegaan ku qiimaysnayn oo qabiil weyne la dhex dhigay iyo xulista xildhibaano aan tar-tan iyo doorasho ku kala hadhayn oo shardiga qabiilnimada ku suntan wada buuxinaya ayaa ah hawl aan si fudud looga gun gaadhi karin, maadaama ay adag tahay si loo helo qayb heshiis lagu wada yahay, isla markaana xildhibaanimada qabiilka lagu noqonayaa ay damac gelinayso qof kasta oo beesha loo qoondeeyey ka tirsan. Sidoo kalena aanay shardi aqooneed iyo mid shaqsiyadeed oo wax lagu kala horaynayaa ku xidhnayn, marka laga reebo dhinaca ay mabaadiida siyaasdeed ee beeshu u badan tahay oo uu qofkii cid kale la figrad ahi ku qadi karo.
Mbagathi oo ah xerada uu shirka Soomaalidu ka socdo oo aan in dhowaale lagu badnaan jirin ayaa beryahan ceeryoon la ah dad aan yarayn oo uu mid kastaaba doonayo inuu ka hadlo habka ay la tahay in wax loo qaybsan karo, ka darane qof waliba wuxu jecel yahay inuu hab maamulka shirka beesha hogaanka u qabto. Isimada beesha markaa wax qaybsanaysa iyo siyaasiyiinta la aqoonsan yahay ee aan dib u heshiisiinta Soomaaliya looga maarmi karin dad aysan aqoonsanayn, isla markaana aan ergada shirka ka mid ahayn ayaa afarta qaaradood ee dunida Mbagathi kaga soo qamaamay. Waxaana xarumaha shirka laga maamulayo hadheeyey dad aan nabadaynta Soomaaliya waxna ku soo kordhin karin, waxna u dhimi Karin oo uu mid waliba dheglaydiisa la ordayo.
Goonyaha meelaha ay beeluhu wax ku qaybsanayaan waxaad kaloo ku arkaysaa dad hoganaya oo uu mid waliba goonidiisa qalin iyo xaashi isugu hayo sidii uu xildhibaanada beeshiisa u qori lahaa. Waxaana Soomaalida laga dareemayaa sida uusan midiba, midka kale waxba ugu ogolayn oo uu qofku qancayo oo keliya marka uu gidaarka guul-darrada soo hardiyo, balse uusan suubaa-salaax iyo baryo ku aqbali karin inuu tanaasulo. Hanjabaadda uu gacan qaadku ka dambeeyo iyo is giiirixinta ay garashada gaabani hagaysaa waa astaamo caado u noqday qaar badan oo ka mid ah dadkan tirada badan ee kuraasta yar ee ka dhexeysa wada caashaqsan.
Si kastaba ha ahaatee, in kastoo sida loo kala sed roonaan karo iyo sida uu qabiil waliba u kala tiro badan yahayba la dareensan yahay haddana, shuushuuda iyo shaqaaqooyinka lagu kala cad goosanayo, asaraarka booliga iyo xaqdarrada lagu raadinayo iyo meel weyn qabsashada ay xeer ka-boodnimadu ku shaqlan tahay ee lagu gor-gortamayaa waa sifayaal ay sed bursidoonimadu hogaanka u hayso oo dib u dhac weyn u keeni kara dhamaystirka qaybaha shirka ka hadhsan. Dhinaca kale, in kastoo ay suuragal tahay inay beelaha qaar qaybsiga xubnaha ka dhexeeya ku guuleystaan, haddana marka aad eegto xinka iyo xasaradaha qabiilada qaar ka dhex socda waxaa lama huraan isu muujinaysa in loo baahnaan doono cid iyaga ka baxsan oo wax u qaybisa. Figradaha laga bixinayo hanaanka ugu fudud ee wax loo qaybsan karo waxa si weyn uga dhex muuqata oo ay dadku aad u hadal hayaan in qaybtii Carta wax lagu saleeyo. Marka meelo badan wax laga eegana waxaad mooddaa waddo kale oo jidkii Carta looga leexan karaa inuusan jirin. Waxayna dadka aragtidan qabaa daliishanayaan inay tahay asaaska keliya ee sugan oo taariikh ahaan wax lagu qaybsaday ee la raaci karo.
Si kasta oo la isu hal-gaado iyo xeelad kasta oo la isu haraatiyaba beesha caalamka iyo wadamada urur goboleedka IGAD ku jira waxaa ka muuqata wada shaqayn iyo isku duubnaan aan loo kala duseyn, waxayna Soomaalida ka sugayaan inay bishan dhexdeeda soo xulaan magacyo ay heshiis ku wada yihiin oo xubno ka noqda baarlamaan ay bisha July Soomaaliya yeelato. Soomaalida lafteedana qaar badan oo ka mid ah waxaa ka muuqda dadaal ay ugu suxul duubayaan sidii ay uga gudbi lahaayeen hadaamaha ka sokeeya qaybaha shirkan geba-gebada ah ka hadhsan oo xaqiiqiyan ah mid aan sahlanayn.
Haddaba, marka caqabadihii uu shirku ka soo gudbey ee yididiilada mustaqbal ee wanaagsan horseedday laga shidaal qaato, isla markaana isla jaan-qaadka beesha caalamka iyo sida ay arrimaha Soomaaliya isula fahmayaan lagu xisaabtamo, sidoo kalena sida ay hogaamiyaasha Soomaalidu uga maarmi waayeen inay nabad wax ku doonaan lagu xoojiyo oo bisaylka guud ee shacbiga Soomaaliyeed ka muuqda laga qiyaas qaato waxaa si la taaban karo isu muujinaysa inaysan Soomaaliya sanadaha soo socda sii ahaan doonin dalka qudha ee aan dawladda dhexe lahayn.
Somali Talk; Nairobi
QORAALADII HORE EE IBRAAHIM MAXAMEDDEEQ
Affey: Dawladda Soomaaliyeed waxaa lagu dhawaaqayaa 30 July 2004
Danjire Maxamed Cabdi Affey oo ah Safiirka Kenya ay u magacawday Soomaaliya oo waraysi siiyey Ridwaan.. Guji